Ogaden News Agency (ONA) – Anna Gomez oo Codsatay In Laxidho Bareket Simun.
Anna Gomez oo Codsatay In Laxidho Bareket Simun.
Posted by Dulmane	/ September 1, 2018
Anna Gomez oo kamid ah madaxda baarlamaanka Yurub ayaa xukuumada Abiye Axmed kacodsatay in cadaalada la horgeeyo dhamaan dambiilayaashii lasoo shaqeeyay maamulkii hore ee xasuuqa iyo cadaalad darada kucaan baxay.
Xildhibaan Gomez ayaa carabka kudhufatay Baraket Simun oo ahaa lataliyihii Raysal-wasaarihii hore ee Itoobiya waxayna mudane Gums sheegtay in xiligii uu Barekat Simun lataliyaha ahaa ay dhaceen tacadiyo badan oo laga galay shacabka Itoobiya gaar ahaan shacabka Soomaalida Ogaadeeniya.
Anna Gomez ayaa sheegtay in dhamaan rajiibkii hore ee lasoo shaqeeyay maamulkii gacanta adkaa la horkeeno cadaalada taas oo haday dhacdo shacabka ree Itoobiya uga dhignaan doonta guul iyo in ay gaadheen maalin cadaaladu shaqaynayso.
Bareket Simun ayaa la ogyahay in uu kamid ahaa shakhsiyaadkii ugu dhibka badnaa saraakiisha talada wadanka soomartay gaar ahaan marka laga eego talooyinka guracan ee uu bixin jiray xiligii uu lataliyaha ahaa, isagoo awood dheeri ah oo kalana kudhex lahaa maamulkii hore ee wayaanaha.
Ma aha markii ugu horaysay ee xildhibaan Anna Gomez ay kahadasho arimaha xuquuqul insaanka ee Itoobiya, waxayna dhowr jeer dacwad kadhan ah maamulkii hore ee TPLF keentay baarlamaanka Yurub halkaas oo lagaga dooday.
Xukuumada cusub ee Itoobiya ayaa umuuqata mid cadaalada marinaysa qaar kamid ah kuwii dambiyada galay sida saraakiishii Soomaalida, halka ay xilal sare umagacaabayso ama ay nabad iyo raaxo kunoolyihiin kuwo dambiyo kagalay shacabka Soomaalida ee dulmiga baahsan dariska u ahaa.
Hay’adaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ayaa inbadan kahadlay xaaladaha bini’aadam nimo ee kajira guud ahaan Itoobiya gaar ahaan wadanka Ogaadeeniya oo ah meelaha ugu daran ee TVdii sano ee lasoo dhaafay lagu hayay gacan bir ah iyo xukun mulatari oo aan lagaqaadaynin.